2014 मा, रूसी मोटर चालकहरुलाई को ध्यान पालकी Dongfeng S30 प्रस्तुत गरियो। बजेट को आधार चिनियाँ कार मंच एक पटक लोकप्रिय hatchback Citroën ZX, 1992 मा प्रतियोगिता को "यस वर्षको युरोपेली कार" मा तेस्रो सब जो आधारित थियो। चिनियाँ नवीनता चाँडै नै ब्याज, किनभने यो सभ्य उपस्थिति घमण्ड र वाहेक, यो मूल्य ट्याग मा स्थापना गरिएको थियो सक्छन्, आकर्षित बल्लतल्ल आधा एक लाख पुग्छ।
सबै को पहिलो म एक सुखद र आधुनिक बाहिरी Dongfeng S30 उल्लेख गर्न चाहन्छु। क्लासिक सेडान डिजाइनर बाहिर दृश्य हुड मा लम्बी हावा सेवन र थप स्टाइलिश vyshtampovki चारै ओर कि क्रोम तेर्सो slats, संकुचित राउन्ड "foglights" संग ट्रिम जंगला सजाने व्यवस्थित। पनि "मर्सिडीज" रोशनी समान W221 को पछाडि छ जो मूल अगाडि प्रकाशिकी को, फारम ध्यान ड्र।
को रियर भाग पनि, रोचक देखिन्छ। विस्तार क्रोम पट्टी मा प्रवाह भने, सामान खण्ड ढक्कन संग जोडिएको छन् दीपक। जारी गर्न निर्णय त पालकी पछाडि शान थपियो।
Dongfeng S30 मा आकार, के 4526 मिमी को एक लम्बाइ पुग्छ। यसको चौडाइ 1740 मिमी छ र उचाइ 1465 मिमी छ। जमीन अवकास 15 रूसी सडक लागि राम्रो सूचक हो जो सेन्टिमिटर छ।
को भित्री सजावट
सैलून Dongfeng S30, सफासँग र सही देखिन्छ साथै अगाडि प्यानल, डिजाइनर अँध्यारो varnished काठ अन्तर्गत प्लास्टिक आवेषण सजाउनु निर्णय गरेको छ। ध्यान पनि स्टेरिड़ आकर्षित छ, केवल पुग्न, तर पनि झुकाव को कोण regulates। सीधा हात मा चयन "मिसिन" छ। अर्को मूल्य को चालक सीट अनुदैर्ध्य समायोजन को राम्रो सीमा छ कि टिप्पण। तर कुनै पार्श्व समर्थन छ।
तथापि, कार को बजेट प्रकृति घरेलू सान्त्वना छैन प्रतिबिम्बित हुन सकेन। जलवायु नियन्त्रण पर्याप्त प्रभावकारी छैन। र, बायाँ Dongfeng S30 समीक्षा मा देखाइएको उहाँले आफ्नो जीवन बसोबास। प्रदर्शन + 30 ° C उजागर हुनेछ भने पनि, सानो घर पर्याप्त न्यानो छ।
यो छैन सानो घर को परिवर्तन को सीमित सम्भावनाहरू बारेमा भने गर्न सकिन्छ। फिर्ता पङ्क्ति मात्र आफ्नो संपूर्णता मा जोडेको गर्न सकिन्छ। र अझै त्यहाँ लामो समय भार लागि आवश्यक छ, जो कुनै प्वाल छ। अव्यावहारिक र विन्डो नियन्त्रण बटनहरू स्थित। तिनीहरूले चालक ढोका को armrest कार्य, र विन्डो गलत समयमा खोलिनेछन् भनेर कुनै पनि लापरवाह आन्दोलन, आफ्नो हात चोट गर्न सक्नुहुन्छ।
Dongfeng S30 पालकी मात्र एक शक्ति एकाइ संग प्रस्ताव गरिएको छ। यसको हुड aspirated सेट 117 "घोडाहरू" को 1.6-लीटर इन्जिन क्षमता। अधिकतम गति पुग्न सक्दैन 180 मी / घन्टा। "सयौं" गर्न प्रवेग बारेमा 11-12 सेकेन्ड (पीपीसी को प्रकार मा निर्भर गर्दछ) लिन्छ।
खैर, यो इन्जिन एक निश्चित प्लस, छ यसको लागत प्रभावकारिता छ। औसत मा, इन्जिन प्रति 100 किलोमिटर मिश्रित मोडमा यात्रा7लिटर खपत।
एकाइ 5-चरण "संयन्त्र" वा 4-ब्यान्ड वैकल्पिक "स्वचालित» Aisin रूपमा संचालित गर्न सकिन्छ। स्वचालित प्रसारण संग संस्करण स्वामित्व गर्ने मान्छे, यो बक्समा खाली छ र पूर्णता Acme छ, तर स्थानान्तरण चालै नपाई ढिलाइ बिना, स्पष्ट स्विच भने। स्वचालित "विचारशील", ड्राइभर बढाउने र धातु गर्न ग्याँस पेडल squeeze गर्यो भने मात्र।
अन्तमा यो उपकरण को उपस्थिति Dongfeng S30 माथि प्रस्तुत छ फोटो जो को दावा बारेमा केही शब्द भन्न लायक छ।
आधारभूत उपकरण पालो संकेत र बिजुली ड्राइव, उच्च-चमक को रियर 'कुहिरो', Tinted कारखाना, मिश्र धातु पाङ्ग्राहरू, सीट को मार्गदर्शन समायोजन, चश्मा, केन्द्रीय armrest र कप होल्डर लागि पन्जा खण्ड संग समायोज्य पक्ष दर्पण संग एलईडी-ओप्टिक्स corrector headlamps समावेश छ। एमपी3/ डीभिडी,4सेन्सर संग पछिल्लो पार्किङ सेन्सर, ब्रेक प्रकाश, nepristognutyh सीट बेल्ट, airbags र यति मा एक रिमाइन्डर लागि युएसबी-पोर्ट र समर्थन एउटा मल्टिमिडिया सिस्टम मा माथि वाहेक, मा। डी
माथिको, छुट Chrome moldings, पछिल्लो पक्ष दर्पण, Motorized प्वाल बाहेक दायरा शीर्ष, कप होल्डर संग पछिल्लो armrest स्टेरिड़, ब्लुटुथ हात-मुक्त विकल्प, र धेरै अन्य थपिएको छोट्याउन।
तपाईं एक निष्कर्षमा पुग्न भने, हामी निर्धक्क भई भन्न सक्छौं: DFM S30 पालकी बजेट श्रेणी देखि एक राम्रो क्लासिक कार छ। र मानिसहरू नयाँ, तर सस्ती विदेशी कार को मालिक बन्न चाहने लागि एक राम्रो विकल्प हुनेछ।
ब्रेक इमहजुरआमा: कसरी जाँच गर्ने? कार मर्मतका
जहाँ आफू र आफ्नो परिवारको लागि अधिकतम लाभ संग, मे मा आराम गर्न?
को बोट मा उत्पादन गुणस्तर नियन्त्रण - प्रतिस्पर्धा को आधार।
आफ्नै हातले एक निजी घर लागि सेप्टिक ट्यांक। सेप्टिक पम्पिंग बिना आफ्नै हातले एक निजी घर लागि ट्यांक